5 Best Krismasy Tsena Ao Alemaina | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Krismasy Tsena Ao Alemaina
Afaka mino azy io efa ho andro ao anatin'ny taona indray? Io no fotoana tsara indrindra ny taona! Tena mahazo any an-fanahy ao amin'izay tsara indrindra any Alemaina Markets Noely! Amin'ny teny Novambra mandra-Noely Eva, efamira tanàna manerana Alemaina no naresaka amin'ny tsena Noely. Amin'ny maha iray amin'ireo fomba amam-panao sarobidy indrindra any Deutschland (Alemaina in alemaina), tanàn-dehibe sy ny zana-bohiny dia samy nankalaza ny fahatongavan'ny vanim-potoana. Dia haka mafana mug ny gluhwein sy hiomana fiambenana chestnuts roasting amin'ny misokatra afo ao ireo tsy afaka miss fety toerana mafana.
1. Frankfurt Romerberg Ary St. Pauls Kianja Krismasy Tsena
Izao no tsara indrindra tany Alemaina Noely Markets nofy natao ny. Afa-mandositra ny feno olona misomebiseby Frankfurt ao an-tanàna Old Town, izay mivadika ho ny Noely dreamland nandritra ny vanim-potoana Noely. Romerberg ary St. Pauls kianja no mandrafitra ny tapany timbered trano tsara tarehy. Dia voky ny hazo feno jiro trano bongo, firavaka, ary nasiany fesitona. Aoka ho azo antoka ny tsy hanapaka ny malaza pealing ny lakolosy, fomban-drazana ny Noely Eva izay ny fiangonana lakolosy ny Old Town ampanenoy avy mifanaraka manerana ny distrika ho an'ny fampisehoana mahagaga traikefa.
A kely raharaha noho ny Frankfurt, fa araka mahagaga! Izany no tanàna kely iray ao anatin'ny maka toerana tsara eny an-tendrombohitra manamorona ny sisin-tanin'i Belzika. Monschau tena velona amin'ny Krismasy tonga fotoana ny tsara indrindra Markets Krismasy tany Alemaina.
Ny tanàna Noely haingon-trano no voaporofo ho toy ny toerana malaza fa efa niloa-ny isan-taona ny Noely manodidina House. Noho izany, raha toa ka tsy toy ny Krismasy, dia izany no antoka fa tsy ny trano hipetrahana! Andro iray dia avy Cologne na Dusseldorf, mandehana jereo ny tanàna hanazava amin'ny takariva raha nibbling eo amin'ny faritra Monschauer Dutchen spongecake ary sipping mulled divay eo anatrehanao doha hiverina any an-tanàna. Miaraka amin'ny arabe rarivato, ny oram-panala nihoatra ny antsasaky ny hazo trano, ary rivotra, mankao ony izany na inona na inona fohy ny idyllic.
Izany no antoka iray amin'ireo Eoropa indrindra tanàna tsara tarehy tamin'ny Moyen Âge. Tena tsara tarehy dia mijery bebe kokoa toy ny sarimihetsika napetraka. Marina indrindra izany amin'ny Krismasy fotoana ary nanasongadina ny fampiantranoana ny sasany amin'ireo tsara indrindra Markets Krismasy tany Alemaina.
Ny Silhouette ny vavahady sy ny tilikambo fiarovana midika aura ny angano. Rehefa miditra amin'ny alalan'ny iray amin'ireo vavahady taloha, ianao dia hahatsapa avy hatrany tsy manana ahiahy ao anatin'ny fotoana voninahitra rindrina tantaram-pitiavana ity ny toerana. Rothenburg fisikidianana efa naharesy ny lasa 1,000 taona sy Mitohy nanipy ny famosaviana teo ny mpitsidika iraisam-pirenena.
Nanomboka tamin'ny taonjato faha-15, tena tsara tsena Krismasy foana ny endri-javatra amin'ny vanim-potoana fety Krismasy. Tsena ity dia afaka mijery indray amin'ny 500 taona fomban-drazana, ary amin'ity indray mitoraka ity satria efa amim-pahendrena izany niova firy avy amin'ny fiaviany ara-tantara. Maro ireo hetsika ara-kolotsaina natao izay mitohy amin'ireo tsena ity. Ny nisongadina ny tsena, na izany aza, dia ny endriky ny ny Rothenburg Riders, izay ihany koa nanome ny anarany tsena ity. Ny tantara niandohan'ny ny mpitaingina tonga amintsika avy amin'ny pahina ary lasa lavitra. Ny razanay no nino fa izy ireo iraka avy amin'ny tontolo hafa, izay nitsingevana ny alalan 'ny lanitra sy ny fanahin'ny maty amin'ny ririnina. Fa ny sary ity angano toetra niova nandritra ny taonjato maro. Ny iray kosa ampiasaina hangovitra noho ny tahotra eo anatrehan'ny endrika eerie ity, amin'izao fotoana izao, na tanora na antitra manantena ny hiverina. Ny bibidia dia mpitaingin-tsoavaly lasa namana iraka.
4. Munich Marienplatz Noely Market
Ny mpanjakan'i Krismasy Munich tsena sy iray amin'ireo tsara indrindra Markets Krismasy tany Alemaina. Zavatra Christkindlmarkt dia hita ao Marienplatz, Munich kianja lehibe, amin'ny mahafinaritra nandraraka tsoavaly tany an-teo akaiky teo tsena eny an-dalambe ihany koa.
Noho ny foibe toerana ao Munich Old Town, izany dia amin'ny alalan'ny lavitra indrindra sy feno olona touristy tsena, fa izany no malaza noho ny antony: fihinanam-bilona, ​​rehefa fihinanam-bilona amin'ny tanana asa tanana nentim-paharazana, mahafinaritra ny tsakitsaky ho nividy sy ny rehetra loatra ny tantaram-pitiavana resahana ny Neues Rathaus. Aza adino ny gana ho eo an-tokotanin'ny ny Rathaus ny mahita bebe kokoa tsoavaly sy ny Christkindl paositra, toerana ahafahanao mahazo Christkindl hajia manokana ho an'ny cartes postales / taratasy.
Sal: Mba hahazoana fanampiny ody fijery, ataovy azo antoka fa mananika St Peters Fiangonana Tilikambo aorian'ny filentehan'ny masoandro loatra!
The Nuremberg Christkindlesmarkt, or Nuremberg Christmas Market, mety Germanys malaza indrindra Krismasy tsena. Ny Krismasy tsena amin'ny Nurembergs Tena Tsena Kianja azo iverenana ny antontan-taratasy voalohany milaza azy ao amin'ny taona 1628, fa Nurembergers mino izany daty kokoa indray aza.
Ny fitandremana ny fomban-drazana manan-danja, ary ny ankamaroan'ny pahitra mivarotra ny entana mivarotra zavatra izay natao faritra rehetra. Na dia ny hazo pahitra ny tenany aza vita amin'ny faritra sourced kesika!
Hahita 180 trano bongo vita amin'ny hazo nivarotra ny zava-drehetra avy amin'ny nentim-paharazana mamboatra lehilahy izay handravaka trano Nurembergers amin'ny fotoan'ny Krismasy ho an'ny Original Nuremberger izay afaka ihany no azo atao hoe ho toy izany raha toa izy ireo vokatra ao anatin'ny fetra an-tanàna sy mandania indrindra 23 grama.
Vonona ny hahatsapa ny majika ny Krismasy amin'ny alalan'ny fitsidihana ny Best Markets Krismasy tany Alemaina? Avy eo lohany ihany ho any Save A Train sy ny Bokin'i tapakila amin'ny minitra!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Best Krismasy Tsena Ao Alemaina” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-christmas-markets-germany%2F%3Flang%3Dmg – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)